War cusub: wakiilka caanka ah ee Jorge Mendes oo soo gaaray Barcelona siduu u dhameeyo heshiiska Angel di Maria
Friday, July 20th, 2018 - 00:09:00
Tuesday August 29, 2017 - 12:51:08 in Wararka by Abdirahman Abduqadir Maankiz
wakiilka caanka ah Jorge Mendes Ayaa gaaray Barcelona si uu u dhameeyo labo heshiis oo midna uu imaanayo kooxda midna uu ka tagayo.
Andre Gomes ayaa la filayaa inuu u ambabaxo kooxda Talyaaniga ee Juventus, halka Angel di Maria uu ka imaan doono Paris Saint-Germain, inkastoo labada xaaladood ay yihiin kuwa waqtiga uu ku dhamaanayo hadana Barcelona ayaa ku rajo weyn in la dhameystiro ka hor inta uusan suuqa xirmin habeenka Khamiista.
Inkastoo Mendes uu yahay wakiilka xiddiga baxaya ee Andre Gomes, waa ay kala tageen Angel di Maria, laakiin waxaa loo keenay inuu heshiiska ka noqdo dalaalka u dhaxeeya PSG iyo Barcelona kuwaasoo xiriirkooda uu xumaaday tan iyo markii uu Neymar u wareegay kooxda ka dhisan caasimada Faransiiska.
Labada madaxweyne ee Nasser Al-Khelaifi iyo Josep Maria Bartomeu ayaa ku aaminaya Mendes inuu dhamesytiro heshiiska Di Maria.
Ciyaaryahanka ayaa shaqsi ahaan doonaya inuu ku laabto Spain oo uu ka garab ciyaaro xiddiga ay isku wadanka yihiin ee Lionel Messi, waxaana ay PSG rajeyneysaa inay ku hesho lacagtii 50ka milyan yuro ee ay ka soo bixiyeen.
PSG ayaa ka warqabta in xagaagan uu yahay fursadii ugu danbeysay ee lacag intaas la eg ay ku heli karaan Di Maria, iyadoo uu qiimihiisa noqon doono kala bar lacagtaas xagaaga danbe madaama uu geli doono sannadkiisii ugu danbeeyay ee qandaraaskiisa.
Baro dhacdooyinka Taariikhiga ee laga bartay fiinaalka koobka adduunka 2018
Sunday July 15, 2018 - 22:02:29
Sidee loogu kala guulaystay abaalmarinada koobka adduunka 2018 ?
Sunday July 15, 2018 - 21:30:29
8 Sababood oo Xulka Faransiisku uga Adkaan karo Xulka Croatia Ciyaarta Final-ka Koobka Dunida ee Maanta
Sunday July 15, 2018 - 07:19:48
Yaa ku Fashilmay, Yaase Waxqabad Fiican kusoo Bandhigay Koobka Dunida ee Ruushka lagu soo Xirayo maanta???
Sunday July 15, 2018 - 07:06:55
Fifa oo faa'iido wayn ku qabta guuldaradii Ruushka kasoo gaartay Croatia, afar dhacdo oo sabab u ah+Sawirro
Monday July 09, 2018 - 12:18:18